काठमाडौं, २१ फागुन । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूहले राज्यलाई हतियार बुझाउनुपर्ने बताएका छन् । मुलधारको राजनीतिमा आएपछि उनीहरुले अनिवार्य राज्यलाई हतियार बुझाउनुपर्ने उनको तर्क छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेत्रविक्रम चन्दले संयुक्त सम्बोधन गरेलगत्तै उनले हतियार बुझाउने कुरा सहमतिको बुँदामा उल्लेख नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
उनले भनेका छन्, – प्रचण्ड आउँदा खोलाले बगायो थोरै हतियार, विप्लव आउँदा पुरै ? राज्यलाई हतियार बुझाउने चौथो बुँदा खोई ?
उनले पुरै देशले यो प्रश्नको जवाफ खोजिरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसको जवाफ दिनुपर्ने बताए । यस्तै उनले कम्युनिष्ट दर्शनका नाममा कोही नेपाली मारिने छैन भनेर साझा उद्घोष गर्नुपर्ने समय आएको बताए ।
उनले भने – कम्युनिस्ट दर्शनका नाममा कोहि नेपाली अब मारिने छैनन् भनेर साझा उद्घोष गर्नेबेला भएन कमरेडहरु ?
सरकार र विप्लव समूहबीच ३ बुँदे सहमतिसँगै विप्लव २ वर्षकाे भूमीगत राजनीतिपछि पहिलाेपटक सार्वजनिक भएका हुन् । ३ बुँदे सहमतिअनुसार विप्लव समूहमाथिकाे प्रतिवन्ध हटेकाे छ भने विप्लव समूहका नेता-कार्यकर्ताहरु रिहा भएका छन् । अरु विषयमा वार्ता र संवादमार्फत अघि बढ्ने समझदारी बनेकाे छ ।